संक्रमण भएपछि ९ महीनासम्म शरीरमा एन्टिबडी रहन्छ | प्रतीक दैनिक - Prateek Daily
Home फरक समाचार संक्रमण भएपछि ९ महीनासम्म शरीरमा एन्टिबडी रहन्छ
संक्रमण भएपछि ९ महीनासम्म शरीरमा एन्टिबडी रहन्छ
कोरोना सङ्क्रमण एकपटक भएपछि एन्टिबडिज शरीरमा कति दिनसम्म रहन्छ, यो प्रश्न सदैव चर्चामा छ । हालै गरिएको अनुसन्धानमा वैज्ञानिकले यसको जवाफ दिएका छन् । वैज्ञानिकको भनाइ छ, सङ्क्रमणको ९ महीनासम्म शरीरमा एन्टिबडिजको स्तर उच्च रहन्छ । चाहे रोगीमा सङ्क्रमणपछि लक्षण देखिएको होस् वा रोगी एसिम्प्टोमैटिक होस् । यो दावी इटलीका पडुआ विश्वविद्यालय र लन्दनको इम्पिरियल कलेजले मिलेर गरेको हो ।
९८.८ प्रतिशत रोगीमा भेटियो एन्टिबडिजः पछिल्लो वर्ष फेब्रुअरी र मार्चमा इटली शहरमा तीन हजार कोरोना पीडितको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको थियो । यसमध्ये ८५ प्रतिशत रोगीको जाँच गरियो । मे र नोभेम्बर २०२० मा एकपटक पुनः रोगीको जाँच गरेपछि एन्टिबडिजको स्तर देखियो । जाँचमा जो फरवरी र मार्चमा सङ्क्रमित भएका थिए उनीहरूमध्ये ९८.८ प्रतिशत रोगीमा नोवेम्बरमा पनि एन्टिबडिज पाइयो ।
लक्षण र लक्षणविनाका रोगीमा एन्टिबडिजको स्तर एउटैः इम्पिरियल कलेजका अनुसन्धानकर्ता इलेरिया डोरिगाटीले भनिन्, अनुसन्धानको क्रममा लक्षण भएको र विना लक्षणका रोगीमा एन्टिबडिजको स्तर एकसरह थियो । यो कुरा स्पष्ट छ कि कोरोनाको लक्षण र सङ्क्रमण कति गम्भीर थियो, यसको एन्टिबडिजको स्तरमा कुनै असर परेको थिएन ।
हरेक चारमध्ये एकजना पीडितले परिवारमा सङ्क्रमण पैmलाएः पडुआ विश्वविद्यालयका शोधकर्ता एनरिको लावेज्जो भन्छिन्, जुन शहरका मानिसलाई अनुसन्धानमा सामेल गरिएको थियो, मेमा त्यहाँको ३.५ प्रतिशत आबादी सङ्क्रमित भएका थिए । यसमध्ये बढीजसो एसिम्प्टोमैटिक थिए । रिसर्चमा हरेक चारमध्ये एकजना व्यक्तिले आफ्नो परिवारमा सङ्क्रमण फैलाएका थिए ।
फोक्सो कोभिडको लक्षण ?
रोगीको फोक्सोमा कोभिड भएको लक्षण कस्तो हुन्छ, यो बुझ्न वैज्ञानिकले एउटा अध्ययन गरे । वैज्ञानिकको भनाइ छ सङ्क्रमण भएपछि पहिलो सातामै कोरोनासँग सम्बन्धित ५ वटा लक्षण देखिन्छ भने रोगीलाई फोक्सो कोभिड हुने खतरा बढी रहन्छ । यी ५ लक्षणमा थकान, टाउको दुखाइ, साससम्बन्धी समस्या, ज्वरो र पेटसम्बन्धी समस्या सामेल छ ।
अनुसन्धान गर्ने ब्रिटेनको बर्मिघम विश्वविद्यालयका शोधकर्ताको भनाइ छ, कोरोना पीडितहरूको तथ्याङ्कको मदतबाट फोक्सो कोभिडको १० वटा लक्षण बताइएको छ । यसमध्ये टाउको दुख्ने, मांसपेशी दुख्ने, खोकी, सास फेर्न समस्या, जोर्नीमा दुखाइ, छातीमा दुखाइ, डायरिया, स्वाद र सुगन्ध नपाउनु हो ।
के हो लङ्ग कोभिड ?
फोक्सो कोभिडको कुनै मेडिकल परिभाषा छैन । सजिलो भाषामा यसको अर्थ हो शरीरबाट भाइरस पसेपछि पनि केही न केही लक्षण देखा पर्नु । कोभिड १९ का जुन रोगीको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ, उनीहरूलाई महीनौसम्म समस्या भइरहेको छ । कोभिड १९ बाट मुक्त भएपछि पनि लक्षण लामो समयसम्म रहिरहनु नै फोक्सो कोभिड हो ।
शोधकर्ता ओलालेकन ली भन्छन्, फोक्सो कोभिडबाट ग्रसित रोगीले आपूmलाई एक्लो महसूस गर्छन् । उनीहरू आपूmलाई रोगी सम्झिन्छन् । शोधकर्ता शमिल हरूनीको भनाइ छ, जबसम्म यो बुझ्न सक्दैनौं कि किन केही मानिस फोक्सो कोभिडबाट ग्रसित छन् । यसैले जरूरी छ यस्तो मामिलालाई चाडै बुझ्नुपर्छ ।
फोक्सोको क्षमता घट्छः वैज्ञानिकको भनाइ छ, अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएपछि सार्स र मेर्सका रोगीमध्ये २५ प्रतिशत व्यक्तिको फोक्सो ठीक ढङ्गले काम गर्दैन । उनीहरूको कसरत गर्ने क्षमतामा गिरावट आउँछ । शोधकर्ता मिलेनी कालवर्ट अनुसार फोक्सोको कोभिडबाट जुझ्ने रोगीमा देखिने लक्षण र कम्पिलकेशन्सलाई गहिराईले बुझ्नुपर्छ ।
फोक्सो कोभिडमाथि युनिभर्सिटी कलेज लन्दनकी न्युरोसाइन्टिस्ट एथेना अक्रमी भन्छिन्, यस्ता रोगीमा पछि गएर कति प्रकारको लक्षण देखिन्छ, यसको निकै कम जानकारी पाएका छौं । यस्तो यसकारण हुन्छ, जसरी समय बित्दै जान्छन्, लक्षण देखिन थाल्छ यो कति गम्भीर हुन्छ, यसको दिनचर्यामा कति असर पर्छ, यसको जानकारी पनि पछि थाहा हुँदै जान्छ।
Previous articleविचित्रको काउली
Next articleबढी भाडा फिर्ता गराउँदै ट्राफिक प्रहरी
टेलिभिजन र घुर्ने बानीबीच सम्पर्क
ग्लोबल वार्मिडको कारण डेंगुको मामिला घट्दै